Indlela yokwenza i-massage ngegazi eliphezulu kwiintsana.
Ukuhlawula nge hypertonia
Ukuphucula ukuxilisa iintsana ezinegazi eliphezulu
Iinkcukacha zezokwelapha zithi abantwana abathathu kwabashumi abatsha bachaphazeleka ngenxa yeengxaki zethoni, apho iintlungu zentsana zihlala zixhatshazwa. Okokuqala, ukuba isifo sifumaneka, kuyimfuneko ukubonisana nodokotela wezingane. Ugqirha onolwazi uza kubeka ngokukhawuleza imbangela yokwanda kweethambo kunye, mhlawumbi, siya kubhala amayeza. Kodwa ngaphandle koko, unina onomdla kufuneka afunde indlela yokuhlambulula nge hypertonia, eya kuqinisekisa ukuphucula ngokukhawuleza.
Kutheni i-hypertension ikhula kwintsana?
Njengomthetho, ngokuqhelekileyo esi sifo asinaso ingozi kumntwana. Inkcitho kuphela yokuxhatshazwa kwemisipha yenycitho yandisa amandla, oko kuyimfuneko ekuphuculeni ngokukhawuleza kwendalo kule minyaka. Ngamanye amaxesha le syndrome yiphumo leengxaki okanye i-pathologies kwinkqubo yesantya. Kodwa ngokuqhelekileyo isizathu sezihlunu ze hypertonic oogqirha bajonga ixesha elide kwisibeleko kwisikhundla sombungu. Ngaphezulu kweenyanga ezisetyenziselwa umama wam, umntwana usetshenziselwa le meko aze aguqulele kwezinye iindawo ukuba umntwana abe nzima.
Emva koviwo, ugqirha unokumisela imithi yokuphumla ejoliswe ekunciphiseni inkqubo yesantya. Kwakhona, ngesifo sesisipha, ukuxubusha umntwana kunconywa. Qalisa ukuphunyezwa kwale nkqubo kubhetele kwiinyanga ezimbini. Funda ngaphezulu ngezantsi.
Ukufuthwa komfutho wegazi ophezulu kwintsana (ividiyo)
Ngaphambi kokuba uqale iseshoni yesistim, umntwana kufuneka aziswe kwimeko ekhululekile. Oku kuya kufumaneka ngokugubungula izibambo, imilenze kunye nentloko kwisisu, emva koko kufuneka uguqulwe (ngakwesobunxele-kwesobunxele, phambili-ngasemva). Kwakhona, umzenzelo "wokuguqula" uya kuba luncedo: umntwana uthatha iimbumba zombini kwaye uqala ukuguqula. Emva koko, ngamnye umthwalo kunye nomlenze kufuneka ugungqiswe ngobumnene. Akucetyiswa ukuba uqale ukuxubusha, xa inkunzi ihlala ingenasiphelo kwaye imemeza, isiphumo esifanelekileyo ukususela ekusebenziseni ukuphathwa kakubi.
Ngoko, ukuxilisa ngokwayo kufuneka kuqale ngamalungu. Ngenye indlela, nganye isingatha kunye nenyawo ukusuka kwisiseko kunye neminwe kufuneka icinezelwe ngesigqi.
Emva koko, iigxina kufuneka zihluthwe ngezandla zombini (ukuhamba kufuneka kube ngokukhawuleza, kodwa kungabi namandla).
Ngobonakaliso obumnene be hypertonus, ezi zixhobo zanele. Ukuba umntwana unxinxisa okanye ahlabe umlenze okanye umlenze, kufuneka ukuba umphumo wokupakisha. Iinkcukacha ezongezelelweyo malunga nobuchule bokuqhuba ezi ntshukumo kule vidiyo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ixesha elifanelekileyo kakhulu lokwenza le massage liyure ngaphambi kokulala. Kuya kuba luncedo kakhulu kumntwana ukuba alele ebusweni obukhululekile, ngakumbi ekubeni uya kulala ngokukhawuleza. Ioli ye-massage okanye ukhilimu akufanele isetyenziswe kangcono.
Ukuphuhlisa impilo kunye nokucwangcisa komntwana onomfutho wegazi ophezulu, ukucoca umzimba ngokufanelekileyo nangokuchanekileyo kuyimfuneko. Iinyanga ezi-2-3 zeendlela ezichanekileyo, kwaye umntwana wakho uya kukhululeka ekuhambeni, ukuxhalabisa okungenangqiqo kuyaphela. Khumbula ukuba isiqinisekiso sempilo yengane yinkathalo kunye nengqalelo yomama!
Kutheni sifuna uncedo lokuqala?
Kuthekani ukuba umntwana unesifo sokukhuseleka komzimba?
Iimfazwe ezincinci emzimbeni
Isiphumo sokuhlamba umzimba emntwaneni
Yintoni enokuyenza ukuze ungaphathanga umntwana xa egula
Iimfihlelo zendlela yangempela yabasetyhini
Ngaba umsebenzi unobungozi ngexesha lokukhulelwa?
Fuuuu! UTimati watshitshisa umfanekiso kunye nezidumbu ezigazi
Inzuzo kunye nengozi yeemveliso eziguqulwa ngokwemizimba
Graten evela kwi-broccoli
Ama-aubergini abhaka ehovini
Wafa ngumculi wengoma uDavid Bowie
Amanyathelo okulungisa abantu kunye nokukhula
Indlela yokwenza ipapyolki yakho
Indlela iinkwenkwezi zaseHollywood ezigcina ngayo impilo yazo
Ukuxinezeleka ngaphambi komtshato
Unokunyamekela njani ingubo yoboya
Ukuba indoda yakho ineepenisi enkulu
Ukupheka kwezitya ezintle ezingavamile
Kwaba nzima ukuphefumula: ezibangela iziganeko kunye neendlela zokulwa
Inkomfa ye-gymnastics yasekuseni yabantwana besikolo
Indlela yokutya nokuzivocavoca ukuze ulahlekelwe isisindo